Dai 23, 2021 by Martin6
Nhasi, mune ino blog posvo, tinokurukura zvinoverengeka zvikonzero zvinokonzeresa INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD Kanganiso pamwe nedzimwe mhinduro dzinoshanda. Uyu ndiwo mhando yeBlue screen yekufa kwekukanganisa neiyo bug cheki kukosha 0x00000004 izvo zvinowanzoitika kana chirongwa chisingapindirani nehurongwa chikashandiswa. Dzimwe nguva, komputa inoenda ichivharika otomatiki kudzivirira yakawanda inouraya data kurasikirwa. Kunze kwezvo, iyo PC inogona kumisa mamwe akakosha mashandiro e Windows OS inokonzeresa mukurasikirwa nebasa rakange risati rachengetedzwa mushure mekukanganisa uku kwangoerekana kwaitika.
Pane zvikonzero zvakasiyana zvinogona kukonzeresa ichi Kanganisa Kodhi kodhi 0x00000004 pa Windows 10 PC senge - inoshaya epakati mafaira, akaora mudziyo madhiraivha, ndangariro kana kuchengetedza nyaya uye nevamwe. Dzimwe nguva, kuvepo kwechingori chechitatu-bato kunyorera kunogona zvakare kugadzira INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD. Vanhu vane ruzivo rwepakombuta rwemberi, kune rumwe rutivi, vane imwe sarudzo yekugadzirisa izvo zviri kukonzera zvikonzero.
Kune avo vasiri nyanzvi dzemakomputa, nzira yakapusa yekugadzirisa iyi mhosho ndeyekuita bhuku rekuvandudza kana kudzosera kubhutu rekupedzisira rakabudirira. Kuti uite izvi, mumwe anofanirwa kutangidza komputa uye omirira kuti isvike kumashoko eBIOS. Kazhinji, iwe uchagamuchira iyi kukanganisa uchitanga chirongwa chitsva kana kuisa zvigadziriso. Heino runyorwa rwemhinduro yese -
Maitiro ekugadzirisa INVALID_DATA_ACCESS_TRAP Kukanganisa BSOD
Pano, isu tinoratidzira akati wandei mashandiro anogona kugadzirisa iyo INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD kukanganisa pa Windows 10 PC -
1} Shandisa Default Windows BSOD Chishandiso- Bhuruu Screen Screen Troubleshooter
Munguva pfupi yapfuura, Microsoft yakatanga chirongwa chitsva chinogona kutsvaga zvingangoita zvikanganiso zveBSOD uye kugadzirisa kwayo futi. Ichi chishandiso chitsva hachisi chimwe kunze kweiyo Windows Blue Screen Troubleshooter. Uyezve, hapana chikonzero chekutora chero chishandiso chekuwedzera kubva muchitoro sezvo ichi chiri chiri-chakavakwa app. Nekutadza, chikamu ichi chakadzimwa, saka gonesa chishandiso ichi uye uteedzere nhungamiro idzi-
Pakutanga, pinda iyo Kuhwina + ini hotkey kufona Windows Settings app.
sarudza Kwidziridzo & Chengetedzo kuita.
Zvadaro, tora disposal kubva kuruboshwe.
Chinja kurudyi uye tsvaga iyo Blue Screen kuita.
Paunenge wawanikwa, tinya pairi kuti uwedzere uye tora Mhanya iyo Troubleshooter bhatani.
Kuita izvi kunogona kugadzirisa INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD Kanganiso pane yako System.
2} Gadzirisa zvese zveyeuchidzo mukati Windows Chiyeuchidzo Chekuyeuka
Zvikamu zvisina kukwana muRandom Access Memory uye zvisina kukodzera kugoverwa kwendangariro zvikonzero zvikuru zviviri zvinogona kukonzera iyi nyaya. Windows Chiyeuchidzo Chekushandisa chishandiso chinogadzirisa zviri nyore nyaya idzi uye chinonyangarika INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD. Pazasi pane iwo mirawo yekutanga chirongwa-
Dzvanya bhatani bhatani uye nyora ndangariro.
sarudza Windows Chiyeuchidzo Chekuyeuka kubva pamhedzisiro.
Sarudza "Tangazve izvozvi uye tarisa matambudziko (akakurudzirwa)".
Semhedzisiro yesarudzo iyi, Windows ichaenda kune yekutanga kutenderera reboot.
Iwe uchaona iro rine ruvara-rwebhuruu peji kuona mamiriro endangariro mune ino sisitimu.
Kana chiyero chekufambira mberi chikava 100%, chishandiso chinotangazve zvakare zvoga.
Mhedzisiro yeiyi kuongororwa ichave ichiwanikwa muSystem tray- Notification nzvimbo apo Windows masimba kumusoro.
3} Bhutsu Windows 10 mu Safe Mode
Sezvo iyi iri BSOD kukanganisa, unogona kusakwanisa kuwana iyo Ratidza Screen. Nekudaro, zvakaoma chaizvo kushandisa chero gadziriso. Kana zvirizvo, bhatisa PC yako muSafe Mode wobva wangoshandisa chero maworkaround. Windows, uchiri muSafe Mode, inotakura chete masevhisi ekutanga ayo anobatsira kugadzirisa izvo zviri kukonzera matambudziko. Verenga uye shandisa anoteedzana anoteedzana matanho ekuti upinde mune Yakachengeteka Maitiro-
Nhanho-1: Dhinda Win + R makiyi pamwe chete kuvhura iyo Run dialog.
Nhanho-2: Type msconfig mubhokisi bhokisi uye pinda iyo pinda kiyi. Izvi zvichaburitsa iyo System Kugadziridza wizard.
Nhanho-3: Chinja kune iyo Bhuti tab wobva wamaka bhokisi rekutarisa padivi Bhuti rakachengeteka pasi Bhoot sarudzo.
Nhanho-4: Pashure pacho, iyo Minimal redhiyo bhatani rinosarudzika rakasarudzika. Kana zvikasaitika, zvimake nemaoko.
Nhanho-5: Dzvanya pane iyo Shandisa bhatani ipapo OK kuchengetedza shanduko.
Nhanho-6: Zvino, vhara iro razvino hwindo uye Dzorerazve mudziyo wako.
Nhanho-7: Kana iyo Windows iri kubhowa, ramba uchimanikidza iyo F8 kiyi. Iko kiyi yebasa inoenderana neyako System modhi.
Nhanho-8: Pakupedzisira, wizard nyowani ichaonekwa pachiratidziri. Sarudza izvi kuti upinde Safe Mode.
4} Misa auto-kutangazve kwePC yako
Kunze kwembichana dzinoverengeka dzinoonekwa nekuda kweINVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD, Auto PC reboot inoshatirisa zvakanyanya. Isu tinosanganisira izwi "kunyanya" nemaune sezvo izvi zvisingatenderi iwe kugadzirisa dambudziko. Nekudaro, kuremadza iyo Auto-kutangazve chimiro kunogona kukupa iwe yakakwana nguva yekufunga uye kugadzirisa iyi yekukanganisa meseji. Heano maitiro ekuenderera-
Pakutanga, enda kuDesktop Screen uchishandisa iyo Kuhwina + D makiyi musanganiswa.
Zvino, tinya Kuhwina + E kuvhura File Explorer.
Pano, tsvaga This PC uye ita-kurudyi kwariri.
Sarudza Properties sarudzo kubva kumenu yemamiriro.
Izvi zvichaburitsa iyo System Properties hwindo.
sarudza Yepamberi Sisitimu Zvirongwa pakoramu yekuruboshwe.
Bhurai kune Kutanga uye Kudzorera chikamu ndokurova iyo Settings bhatani.
Pane inotevera wizard, tsvaga iyo Sisitimu kutadza chikamu.
Bvisa chiratidzo pabhokisi Otomatiki restart.
Ndizvozvo, tinya iyo Shandisa ipapo OK kuchengetedza shanduko dzakaitwa kusvika parizvino.
Kuita matanho ari pamusoro kuchangomisa iyo auto-kutangazve yeOS yako. Iwe unogona ikozvino kutevera nzira dzakapihwa pazasi kugadzirisa INVALID_DATA_ACCESS_TRAP mukati Windows 10 PC.
5} Bvisa yechitatu-Bato Antivirus
Itsika yakajairika yekumisikidza yechitatu-bato yemahara anti-malware chirongwa kuti ubvise mavairasi uye maTrojan mafaera. Nekudaro, ivo havana kukodzera kumisikidzwa sezvo maficha avo akatove akaverengerwa mu Windows Defender app. Nekudaro, zvirinani kugadzira iyo Windows Kuchengetedzwa kwekushandisa seyeye default. Kubvisa ekunze anti-malware zvirongwa zvichave nemikana yepamusoro yekugadzirisa iyo INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD kukanganisa mune ino system. Heano maitiro akazara-
dzvanya Kuhwina + ini kutanga iyo Windows Zvirongwa.
Pahwindo idzva, sarudza iyo Apps kuita.
Shure kwaizvozvo, tinya pane iyo Zvirongwa & Zvimiro kubva kuruboshwe.
Chinja kune iripedyo kurudyi uye iwe uchaona iyo rondedzero yemasevhisi ese akaiswa.
Dzvanya pane yechitatu-bato antivirus.
Sarudza iyo Uninstall bhatani kubvisa iri Anwendung zvachose kubva PC yako.
Kana UAC ichikurudzira, pombi Ehe kupa mvumo yako.
Kubudirira izvi, tevedzera rairo repamhepo kupedzisa kuburitsa.
Ndinovimba, maitiro ari pamusoro anogadzirisa iyo INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD kukanganisa mu Windows 10. Kana zvisiri, edza anotevera workaround -
6} Dzorera zvakashata Windows Zvirongwa zveSystem
Kana chishandiso chako chiri kushanda pane yazvino OS Windows 10, mikana yakakura yekutarisana neye dialog box kukanganisa. Iyo inokuzivisa iwe nezve yakashaikwa DLL faira iyo, munguva pfupi, inova dambudziko basa. Iyo inokanganisa mashandiro ehurongwa uye mune zvimwe zviitiko, inonyatso kudzora iko kushanda kuyedza kumhanya. Pamusoro pe, Windows system zvikamu zvinopinda muhuori nekuda kwezvikonzero zvakasiyana senge malware hutachiona hunoguma INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD. Kutsigira chiito ichi kunogona kukuvadzwa nehurongwa. Neraki, System File Checker inogadzirwa neMicrosoft iyo inogona kuita zvakanakisa. Heano anoteedzana akateedzana ekudzosera akashaikwa DLL mafaera -
Pakutanga, tinya-kurudyi pane Task Manager.
Kana menyu yaonekwa, sarudza Task Manager uye regai ivhure pakuratidzwa.
Click on faira sarudzo iri kumusoro kwekupedzisira kuruboshwe uye sarudza iyo "Runza basa idzva"Sarudzo.
mhando cmd mundima yemavara inowanikwa pano.
Tinya mubhokisi pamberi “Gadzira iri basa neropafadzo dzehutongi"
Click on OK bhatani uye izvi zvichaburitsa Command Prompt semutungamiri.
Zvino, nyora unotevera kuraira uye rova ​​Enter kiyi - sfc / scannow.
Izvi zvichatanga kutarisa zvisizvo uye zvichagadzirisa chero chimwe chikanganiso.
Pakupedzisira, Dzorerazve PC yako kana maitiro acho apera zvachose.
7} Isa zvigamba zvichangopfuura kuburikidza Windows Update
Microsoft inoronga kutsikiswa kwezvishandiso nguva nenguva kuitira kuti ugone kuwana ezvazvino maficha. Neyaimbove, kugadzirisa kwehutachiona huripo kunowanikwa muzvimedu. Chinyakare Chekushandisa Sisitimu inowanzo tenderwa kukanganiswa ne BSOD INVALID_DATA_ACCESS_TRAP. Mune ino kesi, isu tinofanirwa kugadzirisa iyo OS ichifambira mberi ne Windows Zvirongwa zveapp. Heino nzira muchidimbu -
Open Windows Zvirongwa nekudzvanya Hwindo + ini hotkey.
Sarudza iyo Kwidziridzo & Chengetedzo sarudzo inowanikwa ipapo.
Pane peji rinotevera, sarudza Windows Update iri kuruboshwe kuruboshwe.
Chinja kurudyi uye tinya pa Chengetedza zvinyorwa.
Paunoona zvese zvakagadziridzwa, tinya pane iyo Download bhatani pasi peumwe neumwe wavo.
Kudhanilodha kuchatanga munguva pfupi uye kuiswa kuchazotevera kana maitiro apera.
Pakupedzisira, mirira kwechinguva uye wozotangazve iyo PC kana iyo Windows kukurumidza.
8} Dzinga Malware iripo mu Windows chibatiso
Iwe unogona kunge uchiziva malware neTrojans iyo inopa mukati mese pawebhu. Mukati mehurongwa, ivo vanopukuta iyo yakakosha data inodiwa Windows uye nekudaro, isu hatisisina kuchengetedzeka kubva kunjodzi idzi. Mukuita, INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD inoitika muchirongwa neiyo bug yekutarisa kukosha - 0x00000004. Kunze kwezvo, isu tinokwanisa kuona uye kudzinga kutyisidzira kuri mukati Windows Security app, default anti-hutachiona chirongwa. Kuti uite iri basa, heino inotevera rairo -
dzvanya Windows +S makiyi uye rega Taskbar yekutsvaga iuye.
mhando chibatiso uye tapinda kuIta.
Kana iyo interface yeapp ikavhura, sarudza Utachiona & kutyisidzira kuchengetedzwa.
Chinja kurudyi uye tinya pane iyo Scan sarudzo.
Sarudza bhatani redhiyo pamberi pe Yakazara scan kuita.
Click on Shandisa scan ikozvino bhatani kutanga kuona.
Zvinogona kutora nguva apo iko kunyorera kuchizotanga kutsvaga hutachiona mune yega faira mune ino system. Mukupedzisira, iwe uchaona mhedzisiro pachiratidziri.
Munguva iyi, kana chero malware akaonekwa, tinya pane iyo Zvakachena kutyisidzira kuvabvisa.
Kubva pane mamwe matatu sarudzo, sarudza Bvisa chekutanga.
Mushure meizvozvo tinya pane iyo Tanga zviito kupukuta zvese zvehutachiona zvikamu.
9} Gadziridza vatyairi vane huwori neYellow kushamisika chiratidzo
Kazhinji yenguva, zvisingawirirane kana zvakashata madhiraivha emidziyo anotungamira kune INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD Kanganiso pane yako kifaa. Ichi ndicho chikonzero tinokurudzira kuvandudza vatyairi vakaora kana vechinyakare nguva dzose vachishandisa Dhijitari Maneja. Kutsvaga madhiraivha akadaro kuri nyore, zvese zvaunoda kuvhura iyo Maneja weDhivha uye wotarisa yeyero kudanidzira chiratidzo padyo nemutyairi. Kana zvirokwazvo paine imwe, ingo gadziridza iyo chaiyo mutyairi. Ngationgororei matanho akakodzera ekuti tidaro-
Pakutanga, ita kurudyi-kurudyi pane iyo kutanga bhatani uye sarudza iyo manya kuita.
Kana ichikurudzira, nyora "devmgmt.msc”Wobva wadzvanya pinda kuti uzarure Wizard yedhijitari.
Pano, tsvaga chero yero yekushamisira mamaki akasara kune ayo eanowanikwa madhiraivha edhizaini
Kana iwe ukawana, wedzera chairo mutyairi nekudzvanya pamuseve we ">".
Ita kurudyi zvakafanana uye sarudza iyo Update mutyairi kuita.
Iwindo idzva rinokurudzira kupa mbiri sarudzo dzaunosarudza kubva.
Sarudza "Tsvakurudza zvakananga kuti uvandudze software yekutya”Uye iva nechokwadi sezvo Sisitimu ichatarisira zvakasara.
Tevedzera iwo iwo mirairo kune vamwe vatyairi vane huwori zvakare.
Paunenge iwe wagadzirisa zvese zvechinyakare madhiraivhi edhiza, edza kumutsiridza iyo Windows OS zvakare uyezve hauzotarisana neINVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD kukanganisa paunenge uchidaro.
10} Bvisa mafaera ese asina chinhu uchishandisa Disk Kuchenesa Turu
Uchishandisa PC uchiramba uchigadzira zvisina kukodzera mafaera ejunk anoda kubviswa kwenguva yakati, Kana zvisina kuitwa, ivo vanoramba vachiunganidza pamwe nekutora nzvimbo hombe yeiyo HDD inotungamira kune INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD yekukanganisa meseji. Mumamiriro ezvinhu akadaro, unogona kushandisa Disk Kuchenesa Turu kudzima mafaera akadaro uchishandisa anotevera matanho -
Dhinda pikicha ye Window uye nyora kuchenesa mundima yekutsvaga.
Kubva pamhedzisiro yakaonekwa, sarudza iyo Disk Cleanup kushandiswa.
Ikoko kunowoneka pop-up ichikumbira kusarudza iyo chaiyo dhiraivha. Pano, sarudza iyo C: kutyaira akarova OK bhatani.
Ichi chishandiso chekuchenesa chichatanga kutsvaga nzvimbo dzainogona kusunungura-kumusoro.
Sarudza iyoChenesa system file"Bhatani.
Re-sarudza iyo C: kutyaira sezvakaitwa kare uye rova ​​iyo OK bhatani.
Ino nguva, inoita kuverenga kwekuti yakawanda sei kuchengetedza inogona kudzoserwa nekubvisa iyo system mafaera.
Pahwindo rinotevera, sarudza ese ekuongorora-mabhokisi kunze kwekuDownload uye pinda iyo OK bhatani.
Kucheneswa kwemajunk mafaira kuchatanga nekukurumidza mushure.
chitsamba - Tarisa iwo mabhokisi kamwe usati wabviswa sezvo pangave nekuvapo kwemamwe akakosha mafaera.
11} Bvisa maApplication akafanana kuti uderedze njodzi
Kugadzirisa chero kumwe kuomarara, iwe unofanirwa kusunungura izvo zvinowirirana zvinoshandiswa zvinoita zvakafanana mabasa. Kana maapplication maviri kana anopfuura vachiita chinhu chimwe chete, pane mukana wekuti vatange kushandisa imwe zviwanikwa. Kana zvirizvo, unofanirwa kusarudza yakakodzera kwazvo uye kudzima imwe yacho. Heano maitiro ekuenderera -
Pakutanga, pinda Kukunda & R hotkey kududza iyo manya zviripo.
Mubhokisi rekutsvaga, nyora appwiz.cpl uye tora iyo OK bhatani.
Mune iyo rondedzero yezvose zvinodzora mapaneru zvinhu, tsvaga iyo chirongwa (zvakafanana izvo).
Paunenge wawanikwa, sarudza uye rova ​​iyo Uninstall bhatani.
Kana kubviswa kwapera, Dzorerazve yako System uye mirira kusvikira PC yadzokerazve kuchovha bhasikoro.
Iko kukanganisa kunogona kutsakatika mushure meinotevera kupinda.
12} Ita rairo yeDISM kugadzirisa huwori Windows mafaira
Dzimwe nguva, huori mu Windows mafaira anogona kumuka iyi BSOD kukanganisa pane yako System. Kana zvirizvo, ita chishandiso cheDISM kugadzirisa iyi INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD kukanganisa. Heano maitiro akazara -
dzvanya Hwindo + Q hotkey kuvhura iyo Taskbar yekutsvaga.
mhando Raira Prompt mubhokisi remavara.
Kungofa-penya pamhedzisiro uye sarudza Mhanya semutungamiri kubva pane zviri mukati menyu.
Kana UAC ichikurudzira, pombi Ehe kubvumira mvumo yako.
Nyora rairo yakapihwa inoteverwa ne pinda kiyi-
Izvi zvichaona chero nyaya inogona kutungamira kune rakadai dambudziko. Kana yawanikwa, ichagadzirisa zvakafanana zvakare.
Paunomhanya kuraira zvinobudirira, tangazve komputa yako kazhinji. Isu tinovimba nguva ino iwe kuti ubudirire kutora iyo desktop desktop INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD yemahara.
gumi netatu} Shandisa Shanduro Kudzorera kuti usvike kune yekutanga vhezheni
Dzimwe nguva, kana iwe ukaisa maapplication matsva kana kusunungura izvo zviripo, izvi zvinogona kukonzera zvikanganiso mukati meRegistry izvo zvinogona kukurudzira INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD kuti ioneke pachiratidziri chako. Kana zvirizvo, iwe unofanirwa kudzoreredza yaivapo OS kune yekutanga vhezheni apo zvese zvaive zvichishanda nemazvo. Heano maitiro ekusvika kune yapfuura poindi-
dzvanya Win + R hotkey kuvhura iyo Run dialog.
mhando kuparadza mundima yekutsvaga uye tinya iyo OK bhatani.
Izvi zvichatanga iyo System Kudzorera hwindo. Rova iyo Next bhatani kuti uenderere mberi.
Maka Ratidza zvimwezve zvekudzorera cheki bhokisi uye iwe unozowana ese akadaro mapoinzi ane chaiwo Zuva neNguva.
Kubudirira izvi sarudza yazvino yekudzorera poindi uye pinda iyo Next bhatani.
Pakupedzisira, pinda iyo pedza sarudzo kuti utange kudzoresa maitiro.
chitsamba - Maitiro aya anoshanda chete kana iwe wagadzira yekudzorera poindi pane imwe nguva yapfuura. Kana iwe usina, ingo svetuka iyi nzira uye enderera kune inotevera workaround.
gumi netatu} Bvisa zvakasara zvisina kukwana Windows Update
Windows Kwidziridzo inoshandisa iyo Zvirongwa app kurodha pasi & kumisikidza iyo nyowani nyowani yekuwedzera yekuwedzera otomatiki Nekudaro, panogona kuitika zvimwe nyaya pakati peichi chiitiko. Kana izvi zvikaitika, zvinogona kuburitsa dzakadaro INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD zvikanganiso. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unofanirwa kudzima mafaera aya kubva muchirongwa. Heano matanho ekutevera-
dzvanya Win neni hotkey pamwechete, iyo Settings app ichauya pakuonekwa.
Kubva pane zvinyorwa zvezvikamu, sarudza Kwidziridzo & Chengetedzo icon.
Pa peji rinotevera, sarudza Windows Update.
Enda kune inoenderana kurudyi pane iyo peji rimwe uye sarudza iyo Ona nhoroondo yekuvandudza kubatana.
Zvadaro, chengeta pa Uninstall zvigadziriso sarudzo uye mirira kusvikira izvi zvapera.
Icharatidza runyorwa rweyese akaisirwa akawedzera ekuwedzeredza pane yako kifaa.
Hit the Uninstall bhatani rinowanikwa pamusoro peji.
Iye zvino, famba kuburikidza ne-screen rairo kusvikira iyo faira yabviswa zvachose.
15} Run Disk Checking Utility kuburikidza Command Command
Ramba uchishandisa chero chishandiso kwenguva yakareba chingagadzira dambudziko mumatunhu ayo akasiyana. Nekuda kwenzvimbo dzakashata kudaro, unogona kugamuchira INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD Kanganiso paPC yako. Kana zvirizvo, iyo Disk Kuongorora kunyorera chishandiso chinobatsira kwazvo kugadzirisa zvikanganiso zvakadaro. Heino nzira yakajeka-
Chindai hwindo bhatani uye nyora cmd.exe mundima yekutsvaga.
Kubva pane zvinyorwa, ita-kurudyi pa Command Prompt uye sarudza Mhanya semutungamiri kuita.
UAC inokurumidza kukumbira mvumo yako, pombi Ehe kuenderera mberi.
Mushure meizvozvo, nyora rinotevera rairo tambo pane yakakwidziridzwa Command Prompt-
'Chkdsk' inomiririra Dhizaini Dhizaini pakushandiswa. Zvisinei, mamwe mavara ane zvirevo zvawo zvinotsanangurwa pazasi.
C - inomiririra Disk uko OS yakaiswa. Unogona kuchinja izvi kuita D:, E: kana chero zvinoenderana nekushandisa kwako.
f - inoratidza kugadzirisa bugs dzakaongororwa.
r - zvinoreva kutsvaga matambudziko aripo muDisk.
x - inomirira kupatsanura dhisiki vhoriyamu kubatsira maitiro ekutsvaga.
Tevere, tinya Enter Enter kuitira kuti Disk Checking Utility itange kutsvaga zvikamu zvakashata. Izvi zvinotora chinguva, saka, mirira kusvikira izvi zvapera.
Pakupedzisira, dzorerazve PC kuitira kuti shanduko dzakaitwa dzigone kushanda.
Tinovimba, mushure mekuverenga iyi dzidziso, unogona kugadzirisa iyo INVALID_DATA_ACCESS_TRAP BSOD Kanganiso pane yako kifaa. Rudzi urwu rwemamiriro ezvinhu runonetsa chaizvo kana yako inomhanya PC ichigamuchira chero kodhi yekodhi. Nekuda kwechero chikonzero, kana iwe uchiri kuwana saka ita yakachena kumisikidza Windows 10.
Cherechedza - Ita shuwa yekuve ne backup yeese akakosha mafaera kana maforodha usati waenderera kune yakachena kuisa. Tinokurudzira kushandisa chishandiso che USB kuchengetedza data.
FIX: IO1 Kutanga Yakundikana kukanganisa mukati Windows 10
GADZISA: NMI HARDWARE KUKUNDA zvikanganiso pa Windows 10